Active Living and Healthy Eating on a Budget — Somali : Health and Nutrition : Family : University of Minnesota Extension
Extension >Family > Health and Nutrition > Simply Good Eating > Active Living and Healthy Eating on a Budget > Somali
Nolal Dhaqdhaqaaq leh iyo cunteyn caafimaad leh oo dhaqaalaha ku jaan go'an
Fadlan dhegeyso farriintan
Waxaad ku mahadsan tihiin xiisayntiinna barnaamijka Simply Good Eating. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraada,
Wac 612-625-7070, riix #2:
U noolaasho si caafimaad wey sahlantahey waana la awoodaa. Sameynta doorasho lagu hormariyo caafimaadkeena ayaa noqonkara faaiido nolal fog. Laga bilaabo isticmaalka jaranjarooyin ilaa cunida qudaarta ayaan waxaan fursad u leenahey awooda lagu hormarinayo nolasheena.
Barnaamijkaan 30ka daqiiqadoodka ah ayaa sharaxaya ahmiyada nolal dhaqaaq leh iyo hab nolaleed caafi maad oo bixinaya talooyin wax ku ool ah. Waxaa mahad ah jiritaanka macluumaad, doorashooyinka caafi maad ayaa macquul ah xitaa marka dhaqaaluhu xadidan yahay.
"Nolal Dhaqdhaqaaq leh iyo cunteyn caafi maad leh oo dhaqaale ku jaan go'an" ayaa lagu tabin doonaa afar luuqadood ayadoo uu ka bixidoona shaashada Twin Cities Public Television (tpt).
Nolal Dhaqdhaqaaq leh iyo cunteyn caafimaad leh oo dhaqaalaha ku jaan go'an Video:
Transcript (542 K PDF)
Barnaamijkani waxaa soo wada saaray University of Minnesota Extension iyo Emergency & Community Health Outreach (ECHO), Waxaana kala shaqeeyey Minnesota Chippewa Tribe, Minnesota Department of Human Services-Office of Economic Opportunity, West Central Minnesota Communities Action, Inc., iyo United States Department of Agriculture.
Haddi aad doonayso inaad wax badan ka ogaato Simply Good Eating, raadina sidii aad, Soomaaliga noogula soo xiriiri lahayd. Booqo shabakadda ECHO web site hadii aad doonayso macluumaad iyo ilo dhigaala ee la xiriira mawduucan.
Barnaamijka SNAP program ayaa kaa caawinaya inaad ka iibsato dukaanka adeeg cunto sixo leh. Ka wac Minnesota Food Helpline si aad u eegto inaad u: 1-888-711-1151.
Eeg barnaamijka la xiriira: Simply Good Eating